Shabaab oo Weeraray Saldhig ay Ciidamada AMISOM ku lahaayeen degmada…. | Jubbaland Media Online
Maleeyshiyaad aad u hubeeysan oo ka tirsan kooxda Al-shabaab ayaa xalay Saqdii dhexe weerar qorsheeysan ku qaaday saldhig weyn oo ay ciidamada AMISOM ku lahaayeen degmada mahadaay ee gobolka Shabeelaha dhexe.
Gaadiid walxaha qarxa laga buuxiyay ayaa la sheegay in Al-shabaab ay ku dhufteen illinta saldhigga ciidamada AMISOM, waxaa intaa xigay weerar fool-ka-fool ah oo dhex maray labada dhinac.
Gudoomiyaha degmada Mahadaay C/laahi Max’ed Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ciidamada AMISOM ay ka hortageen weerarka ay soo qaadeen Al-shabaab, isagoo intaa ku daray in dib loo riixay maleeyshiyaadkii soo weeraray saldhigga.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka, mana jiraan wax warar ah oo kasoo baxay dhinacyadii ay dirirtu u dhexeeysay.
Al-shabaab ayaa marar badan sidan oo kale weerarro ula beegsaday Saldhigyo ay Al-shabaab ku leeyihiin qeybo ka tirsan gobollada dalka, ayadoo ay u danbeeysay saldhig ay deegaanka Kulbiyoow ee gobolka J/hoose ku lahaayeen ciidamada AMISOM oo ay Maleeyshiyaadka u suurogashay inay gudaha u galaan.